Samsung dia miasa amin'ny famantaranandro miaraka amin'ny Wear OS | Androidsis
Ny tsenan'ny smartwatch dia mitombo hatrany amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Noho io antony io dia marika maro no miloka amin'ny fandefasana ny famantaranandrony manokana eny an-tsena. Samsung dia marika efa manana maro amin'ireo fitaovana azo omena ny mpanjifa. Saingy ny multinational koreana dia miasa modely vaovao, izay mety hiasa amin'ny Wear OS.
Fiovana lehibe ho an'i Samsung izany, satria ny smartwatches teo aloha dia nifototra tamin'ny Tizen ho toy ny rafitra miasa. Raha marina izany, dia ho fampisondrotana lehibe ho an'ny Wear OS, izay tetik'asa be fanirian'i Google.
Tsaho milaza fa nanomboka ny mpampiroborobo fanta-daza, saingy amin'izao fotoana izao tsy dia betsaka loatra no fantatra momba izany. Ankoatry ny famelana fisalasalana ampy momba izany. Satria tsy fantatra raha hiova ho Wear OS amin'ny fiambenana rehetra ny drafitr'i Samsung, sa tetikasa tsy manam-paharoa ho an'ity famantaranandro ity.
Wear OS dia ny fanavaozana ny Android Wear, izay natomboka tamin'ny fiandohan'ity taona ity. Miaraka amin'ity kinova vaovao ity, Google manantena ny hanosika ity rafitra fiasa ity amin'ny famataranandro, izay misy be loatra ny rafi-piasa samihafa hita eny an-tsena. Ka tetikasa sarotra sy be zotom-po io orinasa io.
Voalaza fa ity famantaranandro Samsung miaraka amin'ny Wear OS ity dia hamely ny tsena amin'ny tapany faharoa amin'ny taona. Saingy ny daty famoahana eo ho eo dia tsy voalaza, noho izany dia hiandry ny fahatongavan'ny vaovao isika.
Tsaho ity, ity no tokony hitondrantsika azy. Satria tsy misy fampahalalana momba ny fepetra voalaza ho an'ity famantaranandro ity, na ny momba ny endriny. Ho fanampin'izay, tsy nisy na iza na iza naneho hevitra momba na inona na inona. Raha tsy misy fisalasalana, mety ho fotoana tsara ho an'ny Wear OS izany raha toa ka nandefa smartwatch miaraka amin'ity rafitra fiasa ity i Samsung. Fa amin'izao fotoana izao dia tsy misy fantatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Samsung dia miasa amin'ny smartwatch miaraka amin'ny Wear OS
Ny fivarotan'i Lenovo dia mitohy mihena be any Shina